Wararka Maanta: Sabti, Feb 17, 2018-Bandhig Carweed la xiriira Raashinka iyo wax soo saarka oo ka furmaya Dubai
Sabti, Feberaayo, 17, 2018 (HOL) -Gulfood 2018 ama Carwada Cuntada Aduunka 2018 oo sannadkiiba mar lagu qabto magaalda Dubai ee isutaga Imaaraadka Carabta ayaa berri ka furmi doona Dubai.
Waxaa ka soo qeybgali doonaa 130 wadan oo soo bandhigaya dalgooda iyo Waxa ay soo saaraan, waxaana ay Carwadan noqon doontaa mid suuq u furi doonta wax soo saarka dalalka Bandhiga ka qeybgalaya.
Soomaaliya waa sannadkii labaad ay ka soo qeybgasho, sannadkan waxaa ay nasiib u yeeshay in ay ka soo qeyb-galaan 40 Shirkadood oo beera ama suuq geeya dalaga Beeraha.
Carwadan in ay ka soo qeybgasho Soomaliya sannadkii labaad waxaa fududeeyey mashruuca GEEL (Growth Enterprise Employment and Livelihoods) oo ay maalgeliso dawalada mareykanka.
Ganacsata oo ayaga iska soo baxashay qarashkooda ayaa Hiiraan Online u sheegay in ay mashruucan maqsuud ka yihiin sabbahan soo socda awgood:
In dalag Soomaali soo saartay oo ay dalaaliin ka iibsan jiraan kaddibna magacyo qalaad inta lagu qoro lana sheegan jiray,Balse markii bandhigan lagu arkay ay kashifmeen dalaaliintii qalaad dalagyadiina la qiray in Soomali soo saartay.
Sannadkii hore ka dib kasoo qeybgalkii carwadiiin dhoofinta dalaga korortay 14 milyan oo dollar lana filayo sannadkan in ay labalaabanto 28 milyan dollar ay gaadho.
Ganacsatada in ay fursad u heleyaan in ay ka bartaan ganacsata adduunka habka casriga ee loo ganacsato loona tayeeyo dalaga beeraha.
Suuqyo toos ah in loo helo dalaga dalka.
In hal goob ay ka helayaan iibsadayaasha adduunka oo idil kari karaanna dalaga soomaaliya in ay iibsadaan adduunka oo idil.
Carwadan oo la filayo shanta cisho oo soo socota inay soo booqdaan dad lagu qisaasay boqolkun oo ruux.
Hiiraan Online ayaa idinla socodsiin doonta hadaba wararka ku saabsan Carwadan caalamiga ah ee cunatada adduunka .